Adda Bilisummaa Oromoo (ABO)n biyyatti deebi’uu : Karaa hoolaa dhalee, karaa nagaa galaa! – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsAdda Bilisummaa Oromoo (ABO)n biyyatti deebi’uu : Karaa hoolaa dhalee, karaa nagaa galaa!
Adda Bilisummaa Oromoo (ABO)n biyyatti deebi’uu
09.08.2018Karaa hoolaa dhalee, karaa nagaa galaa!
ABO namni hedduun keenya kan dhageenye bara 1991 yeroo Darguun kufee dhaaboliin siyaasaa kan nuti dhageenye fi dhageenyee hinbeeknes gara biyyaa galan san. ABO yoosuma waajjira ofii Gullalleetti banatee Oromoon akka bishaanii itti jige. Ani yoos baratan ture Koollejjii Kotobeen ture. Hiriyoota koo waliin Suusin Gullallee nu qabee turban hamma gahee dhaqnutti nurraa fagaata ture.
ABO wayyaanee waliin waliigaluu dhabaa dhufuu isaanii hundumtuu nibeeka ture. Garuu ABOn biyya gadhiisee baha kan jedhee tilmaame hinjiru, jiraatus nama xiqqaatu tilmaamuu danda’a.
ABO akkuma biyyaa baheen Oromoon kuma hedduun lakkaahamu hidhaatti guurame, waraanni hedduminaan kaampii galee achumatti wayyaanee harka galee, qabaatan, beekan jaarsi, jaartin, daldalaan, barataan Oromoo hidhaatti guurame. Kuni seenaa ija keenyan agarree, gurra keenya dhageenyee argaa-dhageettii irraa qabnu.
ABO hamma 1998 Jaalle Galaasaa Dilbootin hogganmaa turee san booda sababa na dhukkube jedhuun aangoo Jaallee Dawud Ibsaatif dabarse oduu jettu dhageenye. Seenaa qabsoo Oromoo keessatti yeroo lammeessodhaaf dhaaboliin Oromoo jaha walitti dhufanii Tokkummaa Humnoota Bilisummaa Oromoo (THBO) Asmaraatti kan dhaabanis bara 2000 keessa ture. Oromoon ililchee gammade. Osoo takka hinturin gammachuun kunis dhabamaa deeme. Baruma 2000 keessa Jaalle Galaasafi Jaalle Dawud jiduutti waldhabdeen dhalatee ABO lamatti qoodame (ABO-Shanee fi ABO- QC ykn Qaama Cehumsaa).
Lameen kuni Oromoota biyya alaa jiru kana qircachaa turanii, addaan qoodamnee namni hedduun miseesummaa ofii gadhiise. Haaluma Kanaan osoo jiruu bara 2008 keessa ammas ABO- shaneen bakka lamatti qoodame (ABO-shanee fi ABO-Jijjiirama) ta’e. Ammas kunis diiggaa hedduu fidee, ummata gandaan qoodee waan dhageenyee hinbeekne dhageenye. Haata’uu Oromoon inuma deebi’ee walitti fayye.
Baroota as dhiyoo gara 2013 keessa ABO-Jijjiiramaa bakka lamatti bahe. Isaanis (ABO-Tokkoome fi KWO-Kallacha Walabummaa Oromoo) ta’an. Warri hedduu kanatti hafe immoo walitti dhufee ADO (Adda Dimokiraatawaa Oromoo ijaarratan.
ABOn waggoota 27 darbe kana keessas ta’ee san dura ilmaan hedduu hore. suuraa asii gadii irratti ibseen jira.
Ilmaan ABO dursanii galanii jiran. ABO- shaneen Asmaraadhaa guyyaa torbee tokko biyya gala. Ilmaan ABO kuni walitti dhufanii akkuma DHDUO fi ABO araara buusan wal jidduuttis araara buusuu qaban. Gadoo durii dhiisanii hundi afaan seedaa dubbatanii fixachuu qaban malee maqaa ABOtiin dhaabni sadi afur ummatatti bahee ummatallee rakkisuu tokkummaa keenyas gaaga’uu hinqabu.
Ilmaan ABO amma jiran kan ifatti beekamu kan maqaa ABO irraa hinjijjiiratin sadi. Isaanis ABO-shanee, ABO-QC fi ABO-Tokkoome. Kanniin keessaa kan sirriitti beekamu dhiyootti galu ABO-shanee Asmaraati.
ABO hadaraa keessan yoo galtan waliigalaatii galaa, itti dabalaataanis kana godhaan dhaamsa kooti:
1. Ummata osoo miseensa keessan hintayin, ABO argeetuu osoo hinbeekin dirqama miseesa tokko caalu fudhatee, biyya keessatti lubbuu ofii, qeyee ofii, qabeenya ofii, ilma ofii barumsa ofii wareege kanaaf iddoo guddaa kennaafii
2. Miseensota keessan yoo ABOn biyyaa bahun ABO barbaacha bosonaa fi biyya olla keessa osoo naanna’u rakkoon guddaadhaf saaxilameef qabsoo isaatif murannoo isaatif iddoo kennaa
3. Miseensota keessan dirqamarra osoo jiranuu gaaga’ama diinaa jala bu’anii achumaan iyyaasuun isaanii dhabame, ammallee hinbeekamne xiyyeeffannaa kennaafii barbaachisaa
4. Caasaa keessan tokko tokko namootarra miidhaa geessise ummata kana dhiifama gaafadhaa
5. Sababa ABO qoodameen dirree kibbaaf bakka adda addaatti lubbuu qabsaa’otaa wareegameef dhiifama gaafadhaa, isaanis yaadadhaa
6. Namoonno hagoon kan ABO akka qabeenya dhuunfaa godhatanii miseensota keessaa harcaasan, yakka seenaa dalagame kana fooyyessaa, itti gaafatama fudhadhaa
7. Namoota Miseensas ta’ee miseensa osoo hintaane maqaa ABOtiin wayyaanen miidhaa irraan geessef beekamtii kennaatii jajjabeessaa
8. Dogoggora seenaa bara 1991 dalagame akka irra hindeebi’amne ammumarraa ABO saba bal’aatti deebisaa. Hayyuun akka itti hirmaatuf karaa saaqaa, qeerron akka qabsoo fudhatee haaromsuuf carraa kennaafii.
Karaa nagaa, karaa hoolaa dhalee galaa
Via: Asnake T Erko